FAQs - Higee Machines (Shanghai) Co., Ltd.
Ny vidinay dia omena antonony, izay hiankina amin'ny fepetra takiana amin'ny antsipiriany sy ny fahaiza-manaon'ny mpanjifa. Rehefa voamarina ny antsipiriany rehetra dia hanome sosokevitra sahaza izahay miaraka amin'ny vidiny.
Inona avy ireo antsipiriany ilaina amin'ny teny nindramina?
1.Capacity ny milina tadiavinao.
2. Inona ny tavoahangy na fonosana lehibe ampiasainao?
3. Masinina hafa mifandraika inona no ilaina?
4. Fepetra hafa?
Eny, azonay omena ny antontan-taratasy fandefasana rehetra ny fahazoan-dàlana ho anao, ao anatin'izany ny faktioran-taratasy, faktiora, ny lisitry ny fonosana. Raha mbola mila antontan-taratasy hafa dia ampahafantaro anay alohan'ny fandefasana.
Miankina amin'ny masinina, mazàna ho an'ny masinina tsirairay, manomboka amin'ny 15-30 andro, ho an'ny tsipika feno misy fahaizana lehibe kokoa, angamba mila 45-60 andro.
Amin'ny ankapobeny amin'ny TT, fametrahana 50% mialoha, fandanjalanjana 50% aloa alohan'ny fandefasana.
Ny kalitao no kolontsainay. Toy ny fanao dia manome antoka iray taona sy serivisy maharitra izahay.
Eny, fonosana fanondranana avo lenta no ampiasainay.
Ny vidin'ny fandefasana dia miankina amin'ny fomba safidinao hahazoana ny entana. Ampiasaina matetika ny entana an-dranomasina. Miankina amin'ny seranan-tsambo irinao handefasanay ny vidiny. Raha te hisafidy ny entam-barotra amin'ny rivotra ho an'ny milina kely ianao, dia misy ihany koa ny mandamina. Ho an'ny faritra fanampiny, matetika dia hampiasa express. Hamafisina ny vidiny alohan'ny fandefasana na famaranana ny baiko.